Warbixin:- Alshabaab oo Labo Garab u kala Jabay, Sababtu maxay tahay,? – Hornafrik Media Network
Khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhex galay Horjoogayaasha ugu sareeya Kooxda Al shabaab, taasoo sababtay in Horjoogaha ugu sarreeya Axmed Diiriye uu u baxsado Gobalka Gedo.
tagitaanka Axmad Diiriye ee Gobalka Gedo ayeey ogaatay HornAfrik inuu la xiriiro cabsi uu ka qabo inuu qaarajiyo Horjooge lagu magacaabo Fiidoow oo ah Ninka ugu awoodda badan Kooxda marka laga hadlayo Goboladda Koonfureed ee Somalia, kaasoo ay isku qabteen arrimo dhowr ah.
Horjooge Fiidow ayaa ka mid ah kuwa ugu sareeya Aragagaxisada Al shabaab, waana shaqsiyada ay ka go’do talada kooxda marka laga soo tago Axmed Diiriye oo ah Horjoogaha kooxda,
Fiidow waa shaqsi Galaagal xoog badan ku dhex leh Al shabaab, taasoo keentay inuu ku qasbo Axmed Diiriye inuu ku cararo Gobalka uu muddooyin badan ku noolaa.
walwal iyo cabsi xoogan ayaa soo wajahday Maleeshiyada Alshabaab iyo Horjoogayaashooda, kadib markii ay kordheen Duqaymaha Cirka ah ee lagu bartilmaameedsanayo, Waxayna gaareen hadda inay kala shakiyaan dhexdooda, isla markaana ay is eedeeyaan, Waana mid ka mida sababaha uu salka ku hayo Khilaafka Horjoogayaashan oo ka billowday, markii uu ka shakiyay Axmad Diiriye Dhaqdhaqaaqyadda Horjooge Fiidoow.
Arrinta Labaad ee ay isku qabteen Axmad Diiriye iyo Fiidoow ayaa la xiriirta habka iyo Cidda maamulaysa Dhaqaalaha ka soo xarooda Koonfurta Soomaaliya, taasoo ay ka hesho Kooxdu Isbaarooyinka Jidadka u yaala, Baad ay ka qaadaan Ganacsatadda Dalka, iyo Lacago ay ugu magac dareen Zakawaad oo ay ka aruuriyaan meelaha ay ka taliyaan. Waxaana lacagahaasi uu diiday Horjooge Fiidoow inuu wax ka ogaado habka ay ku baxaan Horjoogaha ugu sareeya Kooxda.
Axmad Diiriye oo ku magacaaban Ninka ugu sareeya Kooxda Alshabaab ayaan hadda awood badan ku dhex lahayn Kooxda, Mana lahan Awoodii Ciidan ee uu Kooxda ku hogaamin jiray Ninkii uu ka dhaxlay Xilka ee Axmad Godane, iyadoona awood yaridda Axmad Diiriye ay soo dadajisay in Kooxdu ay hadda u kala jabto Labo Garab oo ay kala xukumaan Axmad Diiriye iyo Fiidoow.